You are at:Home»संगालाे»राष्ट्रिय समाचार»नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हदः कुन्दन आउट ! प्रेमराजलाई चिठ्ठा
नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लागू भएको छ । आइतबार राति अबेर सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने गरी विधान स्वीकृत गरेको हो ।
तर, यो निर्णयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा इतरको रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायत नेताले नोटअफ डिसेन्टलेखेका छन् ।
Previous Articleकेले बढायो बलात्कार ?
Next Article नेकपा गण्डकीको निर्देशनः भ्रष्टाचार आफूपनि नगर्नुस, अरुलाई पनि गर्न नदिनुस्